ရိုနယျဒိုကို မနျယူအသငျးထံ ပွနျလာအောငျ စညျးရုံးမှုတှေ ပွုလုပျနတေဲ့ ဆိုးလျရှား – Sport Gaber
ပရီးမီးယားလိဂ် နာမည်ကြီး အသင်း ( 1 ) သင်းဖြစ်တဲ့ ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ နည်းပြ ဆိုးရှား သည် အင်အားကြီး အသင်း ( 1 ) သင်း ဖြစ်တဲ့ ဂျုဗင်တပ်အသင်းမှာ ကစားနေတဲ့ ပေါ်တူဂီ ဂိုးသွင်းဘုရင် တိုက်စစ် ကစားသမား ရော်နယ်ဒိုကို အသင်းထံ ပြန်လည် ခေါ်ယူဘို့. အတွက် ဆွေးနွေးမှုတွေ လုပ်ဆောင်နေကြောင်း ဗြိတိန်အခြေစိုက် သတင်းဌာနတွေက အခိုင်အမာ ဖော်ပြသွားကြပါတယ်။
အသက် 36 နှစ် အရွယ် ရှိနေပြီ ဖြစ်တဲ့ ပေါ်တူဂီ ဂိုးသွင်းဘုရင် တိုက်စစ် ကစားသမား ရော်နယ်ဒို သည် ကစားသမားဘဝ နောက်ဆုံးအချိန်ကို ရောက်ရှိနေပေမယ့် ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံး တိုက်စစ် ကစားသမား တွေထဲက ( 1 ) ယောက် အဖြစ် ခြေစွမ်းပြနေဆဲ ဖြစ်ပြီး လက်ရှိရာသီမှာ ဂျုဗင်တပ်အသင်း အတွက် သွင်းဂိုး 36 ဂိုး အထိ သွင်းယူပေးထားနိုင်သူ ဖြစ်ပါတယ်။
ပေါ်တူဂီ ဂိုးသွင်းဘုရင် တိုက်စစ် ကစားသမား ရော်နယ်ဒို သည်လက်ရှိရာသီမှာ ဂျုဗင်တပ် အသင်း နဲ့အတူ သွင်းဂိုးအများဆုံး ကစားသမားဆုကို ရယူနိုင်ဖို့ ကျိန်းသေနေပေမယ့် အသင်းလိုက် အောင်မြင်မှုအဖြစ် ကိုပါ အီတာလီယာဖလား အောင်မြင်မှုသာ ရယူထားနိုင်သလို လာမယ့်ရာသီ အတွက် ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့် ရဖို့လည်း မသေချာတာကြောင့် ယခုနှစ် ဘောလုံးရာသီ ကုန်ဆုံးချိန်မှာ ဂျူဗင်တပ်အသင်း ကနေ ထွက်ခွာတော့မယ်လို့ သိရဘာတယ် ။
လက်ရှိမှာတော့ ဂျုဗင်တပ်အသင်း သည် ပေါ်တူဂီ ဂိုးသွင်းဘုရင် တိုက်စစ် ကစားသမား ရော်နယ်ဒို ကို ရောင်းချလိုခြင်း မရှိပေမယ့် လာမယ့် ဘောလုံးရာသီမှာသာ ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့် မရပါက လုပ်ခလစာ မြင့်မားတဲ့ ပေါ်တူဂီ ဂိုးသွင်းဘုရင် တိုက်စစ် ကစားသမား ရော်နယ်ဒို ကို အသင်းမှာ ဆက်ထိန်းဖို့ ခက်ခဲနိုင်ပြီး ယူနိုက်တက် အသင်း က ပေါ်တူဂီ ဂိုးသွင်းဘုရင် တိုက်စစ် ကစားသမား ရော်နယ်ဒို ကို ခေါ်ယူဖို့ စောင့်ကြည့်နေတာ တွေ့ရဘာတယ် ။
နာမည်ကြီး သတင်းဌာတခု ဖြစ်တဲ့ The Athletic သတင်းဌာနရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ နည်းပြ ဆိုးလ်ရှား သည် အသင်းရဲ့ ဂန္တဝင် ကစားသမားအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ ပေါ်တူဂီ ဂိုးသွင်းဘုရင် တိုက်စစ် ကစားသမား ရော်နယ်ဒို ကို အသင်းထံ ပြန်လည် ခေါ်ယူဖို့ ဆန္ဒရှိနေပြီး ပေါ်တူဂီ ဂိုးသွင်းဘုရင် တိုက်စစ် ကစားသမား ရော်နယ်ဒို ကို မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်းထံ ပြန်လာအောင် စည်းရုံးနေကြောင်းလည်း သိရဘာတယ် ။
ပေါ်တူဂီ ဂိုးသွင်းဘုရင် တိုက်စစ် ကစားသမား ရော်နယ်ဒို သည် ဂျုဗင်တပ်အသင်း ကနေ ထွက်ခွာပြီး ယူနိုက်တက်အသင်းဆီ ပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ပါက လစာငွေ လျှော့ယူပေးဖို့ ဆန္ဒ ရှိနေပေမယ့် အီတလီနဲ့ ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့ အခွန်ဆောင်ငွေ ကွာခြားမှုကြောင့် ယူနိုက်တက်အသင်း အနေနဲ့ ပေါ်တူဂီ ဂိုးသွင်းဘုရင် တိုက်စစ် ကစားသမား ရော်နယ်ဒို ကို တစ်ပတ်လုပ်ခ4သိန်းခွဲ အထိ ပေးရနိုင်တယ်လို့ သိရဘာတယ် ။
ယူနိုက်တက် အသင်းရဲ့ ပိုင်ရှင်တွေ ဖြစ်တဲ့ ဂလေဇာမိသားစုဟာ အသင်းပရိသတ်တွေရဲ့ ဒေါသကို ဖြေလျှော့ဖို့ ပေါ်တူဂီ ဂိုးသွင်းဘုရင် တိုက်စစ် ကစားသမား ရော်နယ်ဒို ကို ခေါ်ယူမယ့် အစီအစဉ်ကို ထောက်ခံထားကြောင်း ပေါ်တူဂီ အခြေစိုက် သတင်းဌာနတွေက ဆိုပါတယ်။
ပရီးမီးယားလိဂျ နာမညျကွီး အသငျး ( 1 ) သငျးဖွဈတဲ့ ယူနိုကျတကျအသငျးရဲ့ နညျးပွ ဆိုးရှား သညျ အငျအားကွီး အသငျး ( 1 ) သငျး ဖွဈတဲ့ ဂြုဗငျတပျအသငျးမှာ ကစားနတေဲ့ ပျေါတူဂီ ဂိုးသှငျးဘုရငျ တိုကျစဈ ကစားသမား ရျောနယျဒိုကို အသငျးထံ ပွနျလညျ ချေါယူဘို့. အတှကျ ဆှေးနှေးမှုတှေ လုပျဆောငျနကွေောငျး ဗွိတိနျအခွစေိုကျ သတငျးဌာနတှကေ အခိုငျအမာ ဖျောပွသှားကွပါတယျ။
အသကျ 36 နှဈ အရှယျ ရှိနပွေီ ဖွဈတဲ့ ပျေါတူဂီ ဂိုးသှငျးဘုရငျ တိုကျစဈ ကစားသမား ရျောနယျဒို သညျ ကစားသမားဘဝ နောကျဆုံးအခြိနျကို ရောကျရှိနပေမေယျ့ ကမ်ဘာ့ အကောငျးဆုံး တိုကျစဈ ကစားသမား တှထေဲက ( 1 ) ယောကျ အဖွဈ ခွစှေမျးပွနဆေဲ ဖွဈပွီး လကျရှိရာသီမှာ ဂြုဗငျတပျအသငျး အတှကျ သှငျးဂိုး 36 ဂိုး အထိ သှငျးယူပေးထားနိုငျသူ ဖွဈပါတယျ။
ပျေါတူဂီ ဂိုးသှငျးဘုရငျ တိုကျစဈ ကစားသမား ရျောနယျဒို သညျလကျရှိရာသီမှာ ဂြုဗငျတပျ အသငျး နဲ့အတူ သှငျးဂိုးအမြားဆုံး ကစားသမားဆုကို ရယူနိုငျဖို့ ကြိနျးသနေပေမေယျ့ အသငျးလိုကျ အောငျမွငျမှုအဖွဈ ကိုပါ အီတာလီယာဖလား အောငျမွငျမှုသာ ရယူထားနိုငျသလို လာမယျ့ရာသီ အတှကျ ခနျြပီယံလိဂျဝငျခှငျ့ ရဖို့လညျး မသခြောတာကွောငျ့ ယခုနှဈ ဘောလုံးရာသီ ကုနျဆုံးခြိနျမှာ ဂြူဗငျတပျအသငျး ကနေ ထှကျခှာတော့မယျလို့ သိရဘာတယျ ။
လကျရှိမှာတော့ ဂြုဗငျတပျအသငျး သညျ ပျေါတူဂီ ဂိုးသှငျးဘုရငျ တိုကျစဈ ကစားသမား ရျောနယျဒို ကို ရောငျးခလြိုခွငျး မရှိပမေယျ့ လာမယျ့ ဘောလုံးရာသီမှာသာ ခနျြပီယံလိဂျဝငျခှငျ့ မရပါက လုပျခလစာ မွငျ့မားတဲ့ ပျေါတူဂီ ဂိုးသှငျးဘုရငျ တိုကျစဈ ကစားသမား ရျောနယျဒို ကို အသငျးမှာ ဆကျထိနျးဖို့ ခကျခဲနိုငျပွီး ယူနိုကျတကျ အသငျး က ပျေါတူဂီ ဂိုးသှငျးဘုရငျ တိုကျစဈ ကစားသမား ရျောနယျဒို ကို ချေါယူဖို့ စောငျ့ကွညျ့နတော တှရေ့ဘာတယျ ။
နာမညျကွီး သတငျးဌာတခု ဖွဈတဲ့ The Athletic သတငျးဌာနရဲ့ ဖျောပွခကျြအရ ယူနိုကျတကျအသငျးရဲ့ နညျးပွ ဆိုးလျရှား သညျ အသငျးရဲ့ ဂန်တဝငျ ကစားသမားအဖွဈ သတျမှတျခံထားရတဲ့ ပျေါတူဂီ ဂိုးသှငျးဘုရငျ တိုကျစဈ ကစားသမား ရျောနယျဒို ကို အသငျးထံ ပွနျလညျ ချေါယူဖို့ ဆန်ဒရှိနပွေီး ပျေါတူဂီ ဂိုးသှငျးဘုရငျ တိုကျစဈ ကစားသမား ရျောနယျဒို ကို မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျအသငျးထံ ပွနျလာအောငျ စညျးရုံးနကွေောငျးလညျး သိရဘာတယျ ။
ပျေါတူဂီ ဂိုးသှငျးဘုရငျ တိုကျစဈ ကစားသမား ရျောနယျဒို သညျ ဂြုဗငျတပျအသငျး ကနေ ထှကျခှာပွီး ယူနိုကျတကျအသငျးဆီ ပွောငျးရှဖွေ့ဈပါက လစာငှေ လြှော့ယူပေးဖို့ ဆန်ဒ ရှိနပေမေယျ့ အီတလီနဲ့ ဗွိတိနျနိုငျငံရဲ့ အခှနျဆောငျငှေ ကှာခွားမှုကွောငျ့ ယူနိုကျတကျအသငျး အနနေဲ့ ပျေါတူဂီ ဂိုးသှငျးဘုရငျ တိုကျစဈ ကစားသမား ရျောနယျဒို ကို တဈပတျလုပျခ4သိနျးခှဲ အထိ ပေးရနိုငျတယျလို့ သိရဘာတယျ ။
ယူနိုကျတကျ အသငျးရဲ့ ပိုငျရှငျတှေ ဖွဈတဲ့ ဂလဇောမိသားစုဟာ အသငျးပရိသတျတှရေဲ့ ဒေါသကို ဖွလြှေော့ဖို့ ပျေါတူဂီ ဂိုးသှငျးဘုရငျ တိုကျစဈ ကစားသမား ရျောနယျဒို ကို ချေါယူမယျ့ အစီအစဉျကို ထောကျခံထားကွောငျး ပျေါတူဂီ အခွစေိုကျ သတငျးဌာနတှကေ ဆိုပါတယျ။
ခ ရက် ဒစ် My Sport Myanmar